दाङका दुई वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार वडाध्यक्षमा विजयी « Lokpath
दाङका दुई वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार वडाध्यक्षमा विजयी
दाङ । दाङका दुई वटा पालिकाका दुई वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएका दुई उम्मेदवारहरुले दलका उम्मेदवारहरुलाई हराउँदै चुनाव जितेका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा गठवन्धन दल र अन्य दलहरुसंग प्रतिस्पर्धा गरेका दुईजना उम्मेदवारहरु वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ र शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु बिजयी भएका हुन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका तुलसीपुर–१६का शिवानन्द डाँगी र शान्तिनगर–२ का सुनिल वलीले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पार्दै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थापित भएका छन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार शिवानन्द डाँगी बिजयी भएका छन् । गठवन्धनदल र नेकपा एमालेलाई हराउँदै उनी वडा अध्यक्षमा बिजयी भएका हुन् । उनले १ हजार ३ सय ४४ मतसहित वडा अध्यक्षमा बिजयी भएका हुन् । गठबन्धनतर्फका भूपबहादुर केसीले ४ सय ६७ मत प्राप्त गरेका थिए भने नेकपा एमालेका अमर बहादुर खड्काले १ हजार १ सय ५९ मत प्राप्त गरेका थिए । डाँगी र एमालेका खड्का विचको मतान्तर १ सय ८५ मत रहेको छ ।भने डाँगी र गठवन्धनका केसी विचको मतान्तर ८ सय ७७ मत रहेको छ । डिसी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १९ वटा वडामध्येमा स्वतन्त्रतर्फबाट वडा अध्यक्षमा बिजयी हुने एक्लो उम्मेदवार हुन् ।
पश्चिम दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनिल वली बिजयी भएका छन् । वलीले ६ सय २९ मत प्राप्त गरी शान्तिनर गाउँपालिका वडा नं. २ को वडा अध्यक्षमा निवार्चित भएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षका पदका लागि नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएपछि वलीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।
वडाको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार ठाकुरप्रसाद केसीले ५ सय ९७ मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार टोपेन्द्रा खड्काले ३ सय ३१ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । यसैगरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार पूर्णबहादुर वलीले ३ सय ३४ मत प्राप्त गरेका थिए ।
वडा अध्यक्षमा बिजयी भएका वली र माओवादीका केसीविचको मतान्तर मत ३२ रहेको छ भने वली र एमालेका पूर्णवहादुर वली विचको मतान्तर २ सय ९५ मत रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७९,जेष्ठ,११,बुधबार १९:४२
बाजुराको बुढीगंगामा मतदान सकियो, आजै मतगणना सुरू हुने
काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा स्थानीय चुनावअन्तर्गत आज मतदान सम्पन्न भएको छ । मतदान सकिएपछि मतपेटिका संकलन कार्य सुरू गरिएकाे
बाजुराको बुढीगंगामा मतदान जारी
बाजुरा । जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्न लागि पुनः मतदान सुरु भएको छ । गत वैशाख ३० गते
बाजुराको बुढीगंगामा भोलि मतदान हुँदै
काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपलिकामा भोलि (बिहीबार) मतदान हुने भएको छ । बुढीगंगामा गत बैशाख ३० गते निर्वाचन स्थगित भएको
स्थानीय निर्वाचनमा देशभर कांग्रेसको अवस्था कस्तो रह्यो ? प्रदीप पौडेलले बुझाए प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय
नेपाल चीन लगानी सम्मेलनका लागि सहयोग गर्न महासंघको आग्रह
थाइल्यान्डकाे बन्डित युनिभर्सिटीसँग एनआरटी ५-२ अन्तरले पराजित
लायन्स क्लब अफ अर्घाखाँचीले राख्यो सन्धिखर्कका चोकहरूमा सचेतना बोर्ड
प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रिने ६ वटा प्रदेशको…
राजश्व लक्ष्य पूरा गर्न भन्सार नाकाले सामान रोक्नुको कुनै अर्थ…
‘साना किसान सबल भएमात्र नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ’
उपराष्ट्रपतिले भारतीय राजदूतसँग भने– नेपाल, भारत र चीनबीच त्रीपक्षीय सहकार्य…
फौजदारी कसुर तथा फौजदारी विधेयक सर्वसम्मतले पारित
मुलुकको आर्थिक अवस्थाका विषयमा प्रधानमन्त्री र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल